Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 233
Xa kusenziwa izikhombisi kwiividiyo ze Tube Kumsebenzi wophando, umxholo utyebisiwe kwaye iAmerican Psychological Association, APA, yathathela ingqalelo le mfuno. Ngesi sizathu, wenza izikhokelo zokuseta izikhalazo kwizithuba ze-YouTube.
Imigaqo APA cebisa ngokubhekisa kwimithombo yeYou Tube enezinto ezithile. Ngokumalunga nombhali, igama lokugqibela kunye negama lomntu onoxanduva lokupapashwa okanye igama leakhawunti yevidiyo kufuneka libekwe.
Izinto ekufuneka zibandakanyiwe kwividiyo ye-You Tube kwi-APA
Ukubhekiswa kwividiyo ye-You Tube kwi-APA kubandakanya umhla wokupapashwa kwevidiyo, isihloko, kunye ne-URL ngqo njengomthombo. Inkqubo ye- iividiyo esele zilayishwe kuYe Tube zingenziwa ngaphambili ngabasebenzisi, okanye zinokulayishwa yiprofayili yephepha kwaye ngamanye amaxesha isiteketiso sisetyenziswa okanye lesiteketiso.
Kucetyiswa ukuba ukhethe olona khetho lufanelekileyo ukuze abafundi bayo nayiphi na loo misebenzi bayifumane ngokulula ividiyo ekubhekiswa kuyo. Olunye ulungelelwaniso msebenzi Kwaye iya kuba yibhonasi eya kufunyanwa ngabafundi abaninzi.
Amagama okugqibela omvelisi wevidiyo ye-You Tube kwifomathi ye-APA makabekwe njani?
Ukukhankanya iividiyo ze-You Tube kwifomathi ye-APA kufuneka ukhumbule ukuba igama lokugqibela kunye negama lokuqala umvelisi ividiyo kufuneka yahlulwe ngeekoma. Ukuba kukho ababhali ababini okanye nangaphezulu, aba babini bokugqibela kufuneka bohlukaniswe ngoonobumba “y” okanye “&”, kuthathelwa ingqalelo ukuba ividiyo iboniswa ngeSpanish okanye ngesiNgesi.
Xa umvelisi etyikitya eneefani zakhe zombini, zombini mazibekwe ngokwahlukeneyo zihombise. Xa umvelisi enegama elintsonkothileyo, oonobumba bokuqala bamagama akhe amabini aza kubekwa ixesha elithile. Unyaka we papasho Kuya kufuneka ibhalwe phakathi kwabazali kunye nesihloko sevidiyo ebhalwe ngoonobumba abakhulu.
Omnye we imigaqo ukukhankanya ividiyo ye-You Tube kwi-APA inxulumene nohlobo lwezinto ezinokumanyelwa, ekufuneka zibekwe kwizibiyeli. Ukugqiba, bhala "Iyafumaneka kwi" kwaye ungeze ikhonkco levidiyo.
Ngubani onomdla wokubandakanya iividiyo zikaYouTube kumaphepha abo ophando?
Los qulatho Iividiyo ezimanyelwayo ze-You Tube zibandakanya imisebenzi enxulumene nophando lwezifundo okanye zesayensi, ezinokuba ngumdla okhethekileyo ekuphuculeni umsebenzi owenziweyo phantsi kwemigangatho ye-APA.
Umgangatho womxholo wokumamela kunye nokufunda uluncedo eyunivesithi okanye kubafundi abaphumeleleyo. Ukubandakanya iividiyo zeTyhubhu kule misebenzi kuphucula umgangatho womxholo wakho uphando.
Umzekelo, iphepha elingcoliseko lwamanzi liya kuboniswa ngcono ukuba libandakanya iividiyo ze-You Tube malunga nalo. umxholo okanye umxholo ngendlela efanelekileyo yokuthintela ulwandle kunye nemilambo ekubeni ingcoliswe, phakathi kwezinye izihloko ezinokusebenza njengomphelelisi.
1 Izinto ekufuneka zibandakanyiwe kwividiyo ye-You Tube kwi-APA
2 Amagama okugqibela omvelisi wevidiyo ye-You Tube kwifomathi ye-APA makabekwe njani?
3 Ngubani onomdla wokubandakanya iividiyo zikaYouTube kumaphepha abo ophando?